Mais Oui: iFrancis St Martin kunye ne-Grand Case Beach Club
Yithi Bonjour ukuya kwiFransi St. Martin kwi-Grand Case Beach Club
Grand Case Beach Club, St. Martin. Grand Case Beach Club
Ekhongwe ngamabhantshi angamashumi amathathu anesixhenxe, iSt. Maarten kunye neSt. Martin ngumFrentshi omncinci kunye nesiDatshi esincinci esilungele kakuhle kwisiqithi esinye. Kulolu hlobo lokubanjwa kwasebusika oludityanisiweyo uluhlu lweenqwelo zeenqwelo-moya ezisuka e-US, isi siqithi sinobukhulu bomhlaba saseCaribbean sisisayina 'samkelekileyo' esahlukanisa iFrancis St Martin ehlangothini olukumantla ukusuka kwi-Dutch St. Maarten ukuya ngasezantsi.
Eyaziwayo ngabantu baseMelika nabaseCanada abafuna ilanga, amaqhosha omabini esiqithi esiqhitshiweyo kwisiqithi seeholide, ezithengayo, kunye nazo zonke-ezibandakanya kwicala laseDatshi ukuya kwiidlo ezidliwayo, iimarike ezijikelezayo kunye namahotele akhonkco enyakatho, kuquka nezantsi -key Grand Case Beach Club.
Hlola i-Grand Case Beach Beach Club Iimali neePhononongo ku-TripAdvisor
I-Sweet Case ye-Sweet Suites
Amagumbi e-Beach Beach Club. Grand Case Beach Club
Awuyi kufumana iibhotile ze-rum ezindala kwifriji kwi-Grand Case Beach Club, kwaye awuzange uphuphe iipilisi kwibhati, ii-buffets ze-titanic, okanye i-butlers ezikhupha iibhegi zakho. Uza kufumana ama-suites amnandi, iimbonakalo ezothusayo kuyo yonke imithi yesundu, kunye nabasebenzi banobuhlobo obunokucinga ukuba udibene nabo ngaphambili.
Ekhutshwe ngamagilebhisi olwandle kunye ne-bougainvillea ebomvu, izakhiwo ezisezantsi ezakhiwa ngamakhaya angama-71 ama-suite kunye neendawo zokulima kunye neLwandle lwaseCaribbean. I-bathrooms yethu ebini, i-loft-style ifanelana nesilwayo kwintsapho ngelixa ii-studio kunye neendawo zokulala ziza kunye nepatiyo eholele elunxwemeni okanye ibhashoni emagumbini angaphezulu. Iikhikhishi zanamhlanje zilungele ukubetha phakathi kwamabhiyoki okutya, i-Wi-Fi isebenza ngokubanzi, kwaye isihlwele se-beach-chair-seat-off-in-court seenkundla ze-tennis kwipropati.
Ukuzibandakanya kwiMidlalo - kunye neMidlalo yokuThengwa
Intengiso enkulu. Melanie Reffes
I-boutique iqhutywe yi-shopper enomdla uMarga Wright, ongowomfazi we-resort manager jikelele, ufanelekile ukukhangela ukubona izikhumbuzo ezivuyisa ngaphandle kwamagnetta kunye neetyunithi eziphambili. Eceleni kwe-boutique uya kufumana i-waterports kunye ne-desk yokutyelela, i-gym, kunye ne-Sunset Café yokutya kwasekuseni, isidlo sasemini, i-cocktail emva kwemini kunye nesidlo sakusihlwa. Iqonga liyakwazi ukucwangcisa ukuqashisa imoto kunye nohambo lweentsuku kwiiqithi ezikufutshane.
Ngethuba elincinci, kukho iindawo ezininzi zokuhlala kwelanga kumabhankini amabini ahlaziya i-resort, kwaye ujikeleza i-pool entsha entsha ephakanyiswe phezulu ngaphezu kolwandle. I-Steve Wright, uBrit ochaphazelekayo, oye waba ngumphathi jikelele iminyaka engamashumi amabini. "Ingaphezu kwesigamu seendwendwe zethu ziphindaphinda iindwendwe, kwaye zihlala zicela indawo efanayo ngexesha elifanayo lonyaka. "U
I-Flip-flop ne-Fendi-friendly, idolophana elincinci ye-Grand Case ihamba ngokukhawuleza kwi-resort; Yilapho uza kufumana iindawo zokutya, iindawo zokudlela, iibheke, ivenkile kunye nekhemisi. Idolophu yaseFransi yaseMartin yaseMarigot iyimizuzu engama-15 ukusuka kwindawo yokutyelela kwaye ithandwa kwiintlanzi zayo, imifuno, kunye nemakethe emveliso kunye neefestile ezininzi, ii-bistrosi kunye neepatisseries ezihamba kwisikwere sedolophu. I-Marigot yilapho i-ferries ihamba khona e- Anguilla naseSt. Barths eseduze .
Indawo enkulu yeBlack Beach Club. Grand Case Beach Club
Usihlalo we-beach on the big pool entabeni kwaye uya kukukhumbula ukuba kutheni ulibhubhise iholide kwindawo yokuqala. Ngelixa i-Grand Case Case Resort ingahle ingabi neentsimbi eziluhlaza kunye neengcingo eziyimpawu zorhwebo zamanye amanxweme asele elwandle, unalo uphephelo lwentlambo lubonwe naphina kwenye indawo kwisiqithi.
Ngama-sun loungers afanelekileyo ukuba athathe ezintlanu (okanye ngaphezulu), kwaye ajikelezwe ngokugqithisa ingilazi ecacileyo emacaleni kwidonki, ii-vistas ezingenakuphazamiseka zase-Anguilla zihle kakhulu ebusuku zikhanya zikhanyisa kude. I-Rock Creole kufuphi kunye nomlambo oselunxwemeni awuzange udala, nokuba kunjalo.
Ukuphambi kweCafé ye-Sunset kunye namanyathelo ambalwa amancinane ukusuka kuma-suites, iPetite Plage ( 'iNxweme elincinane' ngesiFrentshi) ingaba bhetele ngokuthi 'i-Best Siesta Beach'. Intandokazi yamalanga, ulwandle lolwandle lolwandle lucacile unako ukuhlamba elunqeni kwaye ubone izwane zakho kunye nesihlabathi - ucoceke uzakuhendeka ukuba ulandele i-blue and white ithawula isasazwa ngamanzi. Ukuphumla ngokusa ngokusa kusasa ukuya kwintsiku emini kunye nokuphazamiseka, ngaphandle komntu ohlala kwi-Creole ukukhwela kwi-Creole Rock kunye nomoya oqhaqhaqhaqhayo kwimivini yamagilebhisi olwandle.
Igama lithetha konke kwi-Sunset Café, apho ukutya kwasekuseni (kufakwe kwiindleko zokuhlala kwakho) yilayi glasi entsha ye-orange juice, i-chaser ye-coffee eqinile, kunye nebhasikidi egcwele i-ooh-la-la eninzi i-croissants. Kwabo abanomdla omkhulu, amaqanda uBenedict aphezulu.
Isidlo sonyango, ukusuka kumasaladi kunye nekhesi yebhokhwe ephosiweyo i-pineapple carpaccio ehamba ngetinki xa izidlo ziza kudla-ukuze zineenkwenkwezi ezinenkwenkwezi zize zifezeke ngokugqibeleleyo. Iwayini ekhangayo kunye noluhlu lweentengiso kunye neengcamango zentsholongwane ebomvu ekutshitshweni kwelanga kwintengiso yesidlo sokuhlwaya.
Ngomxholo Omkhulu ngeenxa zonke kwikhonkco, izidlo edolophini kufuneka ziyenze. Iinqununu zigijimla i-gamut kwiindawo ezidliwayo zaseFransi ukuya kwi-barbecue grills ebizwa ngokuba yi-lolo, ngokutsho kwengcamango yasendaweni, ifutshane 'neendleko eziphantsi.' Akukho ngaphezu kwe-US $ 15.00 ngomntu ngomnikelo wokutya, abapheki basebenzela umlingo wabo kwi-grills ze-ramshackle ezazisakuba yimibhobho yeoli yensimbi. Abantu abalambileyo bahlala ehlombe ehlombe kwiipikinikishi zaselwandle zihlambela emacaleni amakhulu kunye neencasa ezihlwaya kunye neengqungquthela zebridi zaseCarib. I-Sky's Limit yindlela esiyikhetha ngayo inkukhu, izibambo kunye nokubanjwa kwelanga.
Endleleni eya e-resort, yima ngeCalmos Café elunxwemeni, apho uhlahlo oluqhelekileyo lwamaxesha onke lugcina abavakhenkethi bevakaliswa njengamaqela asekuhlaleni athathe isigaba sehlabathi.
Kulabo abathanda ukutya, bentloko ukuya kutsho kwi-Grand Case-efana nesitalato esincinci ehamba ngokuhambelana nolwandle-kunye nokuvavanya uvavanyo lwe-St. Martin's Dine Around program, ezayo ne-pastever keepsake ipaspoti ukuba nganye yokutyela izitampu emva kokutyelela.
Qala ngeenkqubo zokusebenza (siyancoma i-clamp garlicky clams, ehamba rhoqo kwi-Air France indiza) e-Ocean 82, uze uhambe ngaphesheya kwesitrato ukuya eLe Tastevin ukuze usebenzise i-lobster okanye uhlasele imvana enkulu, i-Bistrot Caraibes ye-bridge i-dessert yokudliwayo kunye ne-nightcap. U-Auberge Gourmande uyasigxina isivumelwano kunye ne-cocktail fruity kunye ne-sorbets e-decadent.
Thatha inqwelo yegalufu ukusuka kwindawo yokutyelela uhambo olufutshane ukuya kwi-Grand Case ($ 6 ngomntu ngamnye) okanye ujonge ukuhamba ngomzuzu-10. Wright uthi: "Kukho iindawo ezininzi zokutyela ezityebileyo ezikuloo ndawo.
Ngomhla wesiLwangu ngo-Apreli, umkhosi wemizi yaseMardi Du Grand kunye nama-grillers aselwandle azalisa iiplati kunye nezizodwa ezifana ne-white-conch sausage, iibhanti ezigalela izibhamu ezinamandla ze-Guavaberry Liqueur (ezenziwe kunye namajikijolo amancinci ahluma ezintabeni) , kunye nabathengisi beendlela ababethabathe ubugcisa kunye nezobugcisa. Ama-boutiques ahlale evulekile ngokukhawuleza, kunye neengqungquthela zentsimbi zigcina intsimbi kuze kube seyure.
I-Great Case Club yenza ibhizinisi elikhulu kunye nezibini ezidibanisa iqhina, ukugubha umkhosi wokukhumbula, nokuvuselela izibhambathiso. I-Catnip yamacandelo amabini kwimishini yokubalekela i-9 ukuya kweyesihlanu ekhaya, ukufumana intando yesibini kubandakanya ibhotile yewayini ekufikeni kunye nokudubula kwintengo yekakhukhunathi emva kokutya.
Ukuba uthi 'Ndiyenzile' elunxwemeni kuluhlu lwamabhakethi, imitshato iyacwangciswa lula kunye namazinga okuphuhlisa amaqela ahlala emagumbi ayishumi okanye ngaphezulu. Uthi u-Wright uthi: "Umnqophiso wethu ukwenza izinto zibe ngcono ngomso ngoko bebekho namhlanje, kwaye oko kuye kwaba yimpumelelo kakhulu kule minyaka." "Siyinto elula kwaye ingathobekiyo, ikhona kodwa ayinakuyithandabuza, kwaye ngokwenene ujabule ukuba ulapha."
USir Roland Richardson engadini yakhe. Melanie Reffes
Kwabalandeli be-rum ekhanda kwiibhotile ezintle, uMadi DouD uhlala enhle kwi-cottage encinci yaseCul-de-Sac. Umzila ongekhoyo, kodwa ufanele ukufumana, ivenkile idonsa i-rum kwiibhotile ezenziwe ngezandla kunye nee-edibles ezifana nama-sauces ashushu kunye nee-jams. "Iindlela zethu zokupheka ziyimfihlelo zethu," utshilo uClaudine, umgcini wesitolo, othanda ukuyigcina igama lakhe. "Siyi-Caribbean version yeCoca-Cola."
Imishishini yeentsapho ezineminyaka amabini amabini ubudala, iiramu zihlonywa iziqhamo zendawo kunye neziqholo kwaye ziza ku-20 flavour, kubandakanywa inanapple, imango, kunye ne-orange kunye ne-ginger.
Ukwenza i-perfume yakho, iTijon kwi-Route de l'Espérance kwiGrand enkulu yi-go-to. Umnini kunye nommeli-ophengululi-khemistri uJohn Berglund wabuyela eSt. Maarten ngo-1998 waza wagqiba ekubeni atshintshe amaqanda abanda abemi baseMinnesota ngokuphila kwesiqithi. Uthi: "Ndicwaninga uSt. Barth noSt. Thomas," uxoxela abantu abahamba ngeenqanawa, "kodwa wagqiba kweSt. Martin kunento endiyifunayo." Abaveleli babukela i-perfume eyenziwa kwi-laboratory yesayithi okanye baqoqa iimpahla zabo kwaye badibanise nabo kwiklasi yeeyure ezimbini. Hlalani ixesha kwaye nilungele ivenkile yesipho kwii- chic zokuqokelela.
USir Roland Richardson ngumculi oqhenywe kakhulu kwisiqithi kwaye, ewe, oyinyaniso 'uSir' 'wathweswa ngu-Queen Beatrix waseNetherlands ngo-2007 ngenxa yeminikelo yakhe yokusebenzela uSt Martin. Wazalelwa ngowe-1944 kwindlu engama-1840, ngoku igalari yakhe e-# 6 rue de la Republique, umdwebi we-impressionist uvula igalari yakhe ebomvu imihla ngemihla ukuba iindwendwe zingaboni kuphela umsebenzi wakhe omangalisayo kodwa zihamba ngegadi kwaye zixoxe umculi.
Enye yeemarike ezivulekileyo kakhulu kwiindawo zaseCaribbean, iMarigot yeMarche ibaluleke kakhulu ngoLwesithathu nangomgqibelo kunye nabathengisi bathengisa yonke into esuka kwintlanzi, iintlobo zemifuno kunye neziqholo ezibugcisa, izinto zokugcoba kunye nezinto ezikhunjulwayo. Yiya khona kwangethuba ukuthengiswa kokuqala kwosuku kuthetha inhlanhla eninzi kubathengisi kwaye bayakuvuyela ukuthengisana ngentengo ephantsi.
Ukuguqula emva kweeyure ezimbalwa zokuthenga, uthatha itafile eSarfina kunye nexesha elide phezu kwe-cappuccino kunye ne-pastry eshisayo ehovini okanye iplate ye-spicy ye-inkukhu ekhutshelweyo e-Bruno's Place eyakhiwe ngaphantsi komthi onomthi. "USt. Martin unikezela iindwendwe zethu iFrance kunye ne-vibe yeCaribbean," utshilo uAlexandra Carty, onguMcebisi wohambo (kungekhona lowo) kunye ne-St. Martin Tourism Office.
I-Grand Case Beach Club Ulwazi
Grand Case Beach Club ebusuku. Ryan McGuire
Ifowuni: +590 590 87 51 87
Isikhokelo kwiiIqithi kwiiCaribbean
IiNkonzo eziPhezulu zeeMpilo ze-Caribbean All-Inclusive Vacation
Ukuhlola iIceland zaseCaribbean Islands zaseJames Bond
Imephu yeLwandle lweCaribbean neIzilwanyana
Isiqithi somlilo: i-Sauce Best Hot Sauce
Iindawo eziphambili zeCaribbean Ecotourism
Festival of Renaissance Festival 2018
Ukutshintshela i-Courts for the Best Sailing kwi-Caribbean
Uhlobo olusenyongweni lweNtsapho Yonyaka omtsha e-Columbus, eOhio
Thatha uhambo phakathi kweCanal yaseBricktown e-Oklahoma City
Vamanos! I-Mexican Ifumana I-Ihotele Yamanzi Ihotele Yamanzi
Iimpawu ezizodwa zeNtengiso ze-holide e-Arizona
Iifoto zeGanesh: 31 Iimpawu ezimangalisayo zeNkundla yeGanesh yaseNdiya
Iindawo ezihamba phambili zokuphumla ngoMeyi noJuni
9 Iimyuziyamu ezinkulu zokutyelela eSt. Louis
Amanqaku angama-5 aPhambili aseColombia
Isidlo sakusasa eWashington, DC
Iindwendwe ezilishumi eziqhelekileyo zokutyelela eWales